रोमको किंवदन्धिहरू, यसको जगदेखि मध्यकालीनसम्म | यात्रा समाचार
लुइस मार्टिनो | 07/05/2021 10:35 | संस्कृति, रोम
रोमको किंवदन्तीहरु को यसको शुरुवात मा नै छ अनन्त शहर। तपाईंलाई थाहा छ, उसको आफ्नै जगको पछाडि पौराणिक इतिहास छ, त्यो रोमुलस र रिमस। तर यसको अतिरिक्त, यति धेरै इतिहास भएको सहरमा अन्य धेरै पौराणिक कथाहरू हुनुपर्दछ जुन तपाईंलाई जान्न मोहित हुनेछ।
हामी तपाईलाई सबै भन्न सक्षम छैनौं, तर हामी तपाईलाई आश्वस्त पार्न सक्छौं कि हामी तपाईलाई सुनाउन खोजिरहेका कथाहरू रोमका अति बहुमूल्य किंवदन्तीहरुका अंश हुन् र ती जान्न तपाई रमाईलो हुनुहुनेछ। कुनै चीजको लागि होईन जुन उनीहरूसँग सम्बन्धित कथाहरू समावेश गर्दछ पहिलो राजाहरू, संग महान सम्राटहरू शास्त्रीय युग र अन्धकार संग मध्य युगहरू सुन्दर इटालियन शहरको (यहाँ हामी तपाईंलाई छोडदछौं) यसको स्मारकहरूको बारेमा लेख)। तर, थप विज्ञापन बिना, आउनुहोस् अनन्त शहरको बारेमा सबै भन्दा राम्रो पौराणिक कथाहरू संग।
1 शहर को स्थापना पछि देखि रोम को किंवदन्तीहरु
1.1 रोमको स्थापनाको कथा
1.2 सबिन महिलाहरूको बलात्कार, अर्को लोकप्रिय रोमन किंवदंती
1.3 मज्जामुरेलीको गल्ली
1.4 क्यास्टेल सन्त'एन्जेलो, रोमका थुप्रै किंवदन्तीहरूको दृश्य
1.5 पससेटो बोर्गो
1.6 टाइबर टापु
शहर को स्थापना पछि देखि रोम को किंवदन्तीहरु
जस्तो कि हामीले तपाईंलाई भनेको थियौं, रोमको उत्पत्तिमा पौराणिक पृष्ठभूमि छ। तर त्यसो को प्रसिद्ध एपिसोड गर्दछ सबाइनहरूको अपहरण, धन्यवाद जुन समयको रातमा आदिवासी रोमन विला बढ्यो। यो सबै संग जाने गरौं।
रोमको स्थापनाको कथा
रोमुलस र रिमस शेल्फलाई ब्वाँसोले भरिएको छ
पौराणिक रोमको उत्पत्ति आठौं शताब्दी ईसा पूर्वको हो। तथापि, रोमको यो दन्त्यकथा पनि सुरु हुन्थ्यो। एस्केनियो, को छोरा एनियास, ट्रोजन नायक, टाइबर शहर को शहर मा स्थापित अल्बा लोंगा.
धेरै वर्ष पछि यस शहरको राजा भनिन्थ्यो न्यूमिटर र आफ्नो भाइ अमुलियम उनलाई हटाए। तर उसको अपराध त्यहाँ रोकेन। त्यसोभए पहिलो छोराको सन्तान हुने थिएन र जसले सिंहासनको दावी गर्न सक्थ्यो, उसले आफ्नी छोरीलाई जबरजस्ती गर्‍यो। रे सिल्विया, भेस्तल हुन, जो उनलाई कुमारी रहनु आवश्यक थियो। यद्यपि दुष्ट अमुलियोले भगवानको इच्छालाई ध्यानमा लिएन मार्टे.
यो जुम्ल्याहा रे गर्भवती भयो रोमुलस र रिमस। तथापि, जब तिनीहरू जन्मिए, दुष्ट राजाले उनीहरूको हत्या गर्नेछ भन्ने डरले उनीहरूलाई एउटा डालोमा हालेर टाईबर नदीमा नै राखियो। बास्केट समुद्रको एकदमै छेउमा पुगेको थियो, सातवटा पहाडहरूको नजिक, जहाँ यो ए द्वारा देखियो लोबा। उनले बच्चाहरूको उद्धार गरिन् र उनको गर्वको हेरचाहमा राख्छिन् प्यालाटिन हिल जबसम्म तिनीहरू गोठालाले भेट्टाएनन्, जसले तिनीहरूलाई आफ्नो घरमा पुर्याए, जहाँ तिनीहरूलाई उनकी पत्नीले हुर्काए।
वयस्कको रूपमा, ती दुई युवाहरूले आमूलियोलाई विद्रोह गरे र न्यूमिटरलाई प्रतिस्थापित गरे। तर हाम्रो इतिहासको लागि हाम्रोलागि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा के हो भने यो हो कि रोमुलस र रिमसले नदीको किनारमा पनि अल्बा लa्गाको उपनिवेश स्थापना गरे, ठीक ठीक। जहाँ उनीले ब्वाँसोले उनीहरूलाई थिचे, र तिनीहरूका नेताहरूको घोषणा गरियो।
यद्यपि नयाँ शहरको निर्माण गर्ने सहि ठाउँको बारेमा बहसको कारण दुबै बिचको दु: खपूर्ण विवाद उत्पन्न भयो जुन अन्त हुनेवाला थियो। रेमोको मृत्यु आफ्नै भाइको हातमा। पौराणिक कथाका अनुसार रोमुलस यसरी बने रोमको पहिलो राजा। यदि हामी पुरातनताका इतिहासकारहरुमा ध्यान दिन चाहन्छौं भने यो ईसापूर्व 754 XNUMX XNUMX को कुरा हो।
सबिन महिलाहरूको बलात्कार, अर्को लोकप्रिय रोमन किंवदंती
सबिन महिलाहरूको बलात्कार
साथै रोमुलसको समयसम्म सबिन महिलाहरूको अपहरणको कहानी पनि हो जुन अर्को लोकप्रिय पौराणिक कथा हुन्। भनिन्छ कि शहरको संस्थापकले लाजियोबाट कसैलाई पनि नयाँ नागरिकको रूपमा स्वीकार गरेमा यसलाई आवाश्यक भयो।
यद्यपि तिनीहरू व्यावहारिक रूपमा सबै मानिस थिए जसले रोमको विकासलाई असम्भव बनायो। Romulus त्यसपछि याद गर्नुभयो सबाइनका छोरीहरू, जो नजिकैको पहाडमा बस्ने Quirinal उसले तिनीहरूलाई अपहरण गर्नलाई छाडिदियो।
त्यसो गर्न उसले ठूलो भोज उडायो र छिमेकीहरूलाई निम्त्यायो। जब सबाइनहरू मद्यले पर्याप्त दned्ग परेका थिए, उनले तिनीहरूका छोरीहरूलाई अपहरण गरे र रोममा लगे। तर कथा अन्त हुँदैन।
यसै बीचमा, उनले शहरको कमान्ड छोडेका थिए Tarpeia, जो ल्याटिनसका राजासँग प्रेममा थिए। उनीहरूले छोरीहरू अपहरण गरिसकेपछि रोमविरुद्ध युद्ध घोषणा गरिसकेपछि, ती केटीले राजाको साथ सम्झौता गरे कि यदि उसले आफ्नो देब्रे हातमा भएको कुरा बदल्दै उनलाई दिन्छ भने उसले शहरमा गोप्य प्रवेशद्वार देखाउँदछ। उनले सुनको एउटा ब्रेसलेटको कुरा गरिरहेको थियो तर जब साबाइन्सलाई रोममा गोप्य पहुँच भएको थाहा भयो, तब राजाले आफ्ना सिपाहीहरूलाई उनीहरूको ढालले तर्पेईलाई कुचल्न आदेश दिए र उसको देब्रे हातमा ठोक्किए।
यद्यपि यस कथाको अन्त्यमा अर्को प्रकार छ। यसले भन्छ कि रोमी महिलाले युवतीको विश्वासघातको बारेमा थाहा पाएर उनलाई एउटा चट्टानमा फ्याँकिदिए जुन कुरा त्यस समयदेखि यथार्थ हो। तारपेया चट्टान.
अन्तमा, त्यहाँ साबाइन र रोमीहरू बीच झगडा भयो। वा बरु, यो भएको थिएन किनभने अपहरण केटीहरू दुवै सेनाको बीचमा उभिए लडाई रोक्न। यदि रोमीहरूले जितेका भए उनीहरूले आफ्ना बाबुआमा र दाजुभाइलाई गुमाउँदछन्, यदि सबिनहरूले गरे भने तिनीहरू पतिविना छोडेर जान्छन्। यसैले दुबै शहरको बिचमा शान्ति हस्ताक्षर भएको थियो।
मज्जामुरेली स्ट्रिट, रोमको अर्को किंवदन्तीको दृश्य
यदि तपाइँ भ्रमण गर्नुहुन्छ ट्रस्टेभरे रोमन, तपाईले एउटा सानो सडक भेट्टाउनुहुनेछ जुनबाट सुरू हुन्छ सेन्ट क्रिसोनगसको चर्च, माथि पुग्छ सान गालिसानो को। यो गल्ली कि छ माजामुरेली। तर यी जीवहरू को हुन् जसको रोममा सडकको नाम पनि छ?
हामी ती साना बच्चाहरूसँग उनीहरूलाई चिन्न सक्छौं शरारती प्रतिभा त्यो विश्वको सबै पौराणिक कथाको हिस्सा हो। तिनीहरू एक प्रकारका एल्कहरू हुन् जसले सडकहरूमा बसिरहेका व्यक्तिहरूसँग साना चालहरू पाउँदा रमाईलो गरिरहेका हुन्छन्।
वास्तवमा भन्ने हो भने, यस कथाको एउटा कथाले भन्छ कि त्यहाँ एक मानिस बस्ने गर्दथ्यो जो अलौकिक प्राणीहरू देख्नको लागि जादुगरको रूपमा प्रतिष्ठित थियो। यस व्यक्तिको घर अझै सडकमा संरक्षित छ र भनिन्छ प्रेतवाधित.
जे होस्, सबै कुरा मज्जामुरेली वरिपरि खराब छैन। रोमको यो पौराणिक कथाका अन्य कथाहरूका लागि, तिनीहरू लाभदायक प्राणीहरू हुन् जसले सडकका छिमेकीहरूको रक्षा गर्न समर्पित छन् जो तिनीहरूको नाम बोक्दछन्।
क्यास्टेल सन्त'एन्जेलो, रोमका थुप्रै किंवदन्तीहरूको दृश्य
अनन्त शहरको सब भन्दा महत्वपूर्ण स्मारक मध्ये एक बाहेक, क्यास्टेल सन्त'एन्जेलोका धेरै पौराणिक कथाहरू छन्। हुनको लागि निर्मित सम्राट हैड्रियनको मूसोलियम, को लगभग दुई हजार वर्षको इतिहास छ। यसैले तपाईलाई चकित पार्ने छैन कि यो धेरै पौराणिक कथाहरूको दृश्य भएको छ।
ती मध्ये सब भन्दा लोकप्रिय यसको नाम को कारण हो। हामी हाम्रो युगको 590 XNUMX ० सालमा छौं। एउटा विनाशकारी प्लेग महामारीको बेला रोम र पोपमा बेफलेन भएको थियो ग्रेगरी ग्रेट एक जुलुस आयोजित। जब यो महल नजिक आईपुग्यो, यो माथि देखा पर्‍यो एक प्रधान दूत महामारीको अन्त्यको घोषणा गर्न उसको हातमा तरवार थियो।
त्यसकारण, महल मात्रै डे भनिन्छ सन्त'एन्जेलो, तर थप रूपमा, एक प्रधान दूत को चित्र यसको शीर्ष मा निर्मित थियो कि, धेरै पुनर्स्थापन पछि, तपाईं अझै पनि आज देख्न सक्नुहुन्छ।
पाससेटो बोर्गो, रोमका अरू धेरै पौराणिक कथाहरूको दृश्यको अर्को
हामी अघिल्लो निर्माणबाट टाढा जाने छैनौं अर्को पौराणिक कथा र पौराणिक कथाहरूको भरिएका रोमन बिन्दुहरू पत्ता लगाउन। पूर्व passetto वा पर्खाल पथमा मिल्दछ, ठीकसँग, सन्त'एन्जेलोको महलको साथ भ्याटिकन.
यो साढे माइल मात्र हो, तर सबै प्रकारका दृश्यहरू भइसकेका छन् फुटेको आलु र अन्य पादरीहरू कसले लडाई र लुटेको समयमा लुक्न खोज्यो। यद्यपि किंवदन्ती भनेको छ कि जसले यसलाई सत्तरी पटक पार गर्छ उसले कसरी सबै समस्याहरू समाप्त हुन्छ भनेर देख्दछ।
पौराणिक डि बोर्गोको कथा यति प्रसिद्ध छ कि यो असंख्य चलचित्र, टेलिभिजन श्रृंखला र भिडियो गेमहरूमा देखा पर्‍यो।
हामी यस टापुमा रोमको किंवदन्तीहरूको हाम्रो यात्रा समाप्त गर्छौं, जुन तपाईंले आज टिबरको बीचमा देख्न सक्नुहुन्छ। यो डु boat्गा जस्तो आकारको हुन्छ र २ 270० मिटर लामो र meters० मिटर चौडा मात्र हुन्छ। यद्यपि यो प्राचीन कालदेखि नै पौराणिक कथाहरूको विषय भएको छ।
वास्तवमा उनीहरूले आफ्नो उपस्थितिलाई असर गर्छन्। भनिन्छ कि रोमको अन्तिम राजा, Tarquinius शानदार, आफ्नै साथीहरूले नदीमा फाल्यो। ऊ एक भ्रष्ट मानिस थियो जसले उनीहरूको गहुँ पनि चोरेका थिए। यस घटनाको लगत्तैपछि यस टापु देखा पर्न थाल्यो र रोमीहरूले सोचे कि यो राजाको शरीरको वरिपरि जम्मा गरिएको तलछटको लागि धन्यवादको उत्पत्ति भएको हो जसको एक राम्रो अंश हो, गहुँ उसले चोरेको थियो.
यी सबैको लागि, टिबेरिनाले सधैं रोप्यो डर रोमका नागरिकहरूमाझ। यो धेरै शताब्दीहरू सम्म चल्यो, प्लेग महामारीको समयमा, ए सर्प (चिकित्साको प्रतीक) जसले रोग समाप्त गर्‍यो। धन्यवादको रूपमा, रोमीहरूले निर्माण गरे Aesculapius को सम्मान मा एक मन्दिर टापुमा र यो यात्रा गर्न डराउनु बन्द भयो। हामी तपाईंलाई यो सम्झना गराउँदछौं कि यो आकृति ठीक औषधोपचारको रोमन देवता थियो।
अन्तमा, हामीले तपाईंलाई केहि सब भन्दा लोकप्रिय बतायौं रोमको किंवदन्तीहरु। यद्यपि यस शहरको पुरानो शहरसँग धेरै अन्य व्यक्तिहरू हुनुपर्दछ। ती मध्ये ती पाइपलाइनमा रहेको छ र हुनसक्छ हामी तपाईंलाई अर्को लेखमा बताउँदछौं त्यो हो सम्राट नीरो र सान्ता मारिया डेल पुएब्लोको बासिलिका, को एक डायोस्कुरी क्यास्टर र पोलक्स, को सत्यको मुख वा धेरै जसमा मुख्य पात्रको रूपमा छन् हर्कुलस.
लेखको पूर्ण मार्ग: यात्रा समाचार » शहरहरू » रोम » रोमका किंवदन्तीहरू
क्यारिबियन क्षेत्रको विशिष्ट नृत्य